Maitiro ekuisa foni kubatirira kubva kuApple Watch | Ndinobva mac
Maitiro ekuisa foni kubatirira kubva kuApple Watch
Pane zvakawanda zvingasarudzwa zviripo paApple Watch patinogamuchira kufona, zvinoitika ndezvekuti izvo zvinoonekwa pachiratidzu vanozvigamuchira kana kungorembera. Mune ino kesi isu tiri kuzokuratidza iwe hunyengeri kana isu tinogona kutoti "zvakavanzika basa" zvatiri chokwadi kupfuura mumwe wenyu asingazive. Chokwadi vamwe vazhinji vaizviziva asi zvakakosha kuvagovana kuitira kuti munhu wese azive kuti varipo kubva Apple iyo yandinoyeuka haina kuitsanangura panguva yekuratidzwa kweOSOS, saka zvatiri kuzoratidza ndezvekuti isa kufona kubatisisa kubva kuApple Watch yako.
Zvakanaka, hazvisi zvekurembedza kana kurega chirauro sezvo izvi zviri pachena uye zviri nyore kwatiri, ndezvekukwanisa kutumira meseji zvakananga kumunhu uyu anotifonera kana kusimudza nekusiya foni yakamirirwa kuti aipindure kubva iyo iPhone. Izvi zvinouya zvinobatsira pane dzakawanda zviitiko uye patinoisa mushandisi kumubatisisa, iye anouya mukuita ndiSiri (izwi rake) uyo tsanangurira munhu anotidana kuti takavaisa parutivi kutaura naye munguva pfupi.
Kuti tiite izvi isu tinongofanirwa kuita chiratidzo pane wachi patinogamuchira kufona, ichi chiito chiri Rova zvakasimba kubva pasi kumusoro uye iyi menyu ichaonekwa:
Saka izvi zvinonyarariswa uye patinokwanisa kupindura kufona isu tinongofanirwa kutora iyo iPhone tobaya bhatani kuti titore runhare. Ramba uchifunga kuti iyo foni inotorwa kubva pakutanga, saka iyo inotora nguva yakareba kutora iyo iPhone, iyo yakareba iyo mumwe munhu achange akamira. Kune mameseji izvo zvazvinoita chaizvo ndizvo bvumidza iwe kutumira meseji kuti ugone kuti "Ndichakufonera gare gare" kana zvakafanana. basa rakakura pamamiriro ezvinhu mazhinji andaisaziva ini pachangu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Tutorials » Maitiro ekuisa foni kubatirira kubva kuApple Watch
Mc nulty akadaro
Ndatenda zvikuru nemupiro, zvakanaka chaizvo kudzidza chimwe chinhu chitsva newe, zvakare ndatenda zvikuru
Pindura Mc nulty
Mhoro zvakanaka! Ini ndaedza bvunzo, asi mumwe munhu anongonzwa beep, asi Siri haana kumunyevera nezve chero chinhu. Iwe unofanirwa kuve uine chero sarudzo yakamisirwa yeizvi?
Inpaint 6 inotibvumidza kudzima zvese zvasara pamifananidzo yedu
Maitiro ekuvhara ese ese Safari tabo kunze kwekunge isu tiri